Ampidino 7-Zip ho an'ny Windows
7-Zip dia rindrambaiko maimaimpoana sy matanjaka izay ahafahanny mpampiasa solosaina manery ireo rakitra sy lahatahiry ao anaty kapila mafy na rakitra decompress.
Na dia maro aza ny programa famatrarana rakitra eo aminny tsena, ny 7-Zip no safidy voalohany aminny mpampiasa maro noho ny fanohananny endrika malalaka sy maimaim-poana.
7-Zip, izay azonao atao ny manomboka mampiasa aorianny dingana fametrahana tsotra be dia be, mamela anao hijery mora foana ireo rakitra rehetra aminny solosainao ary hanao asa mora aminizy ireo noho ny fisehonilay rakitra manager.
Manohana ireo endrika rakitra sy tahiry voatahiry malaza toa ny RAR, ZIP, TAR, GZ, LZH, LZA, ARJ ary ISO, ny programa dia manala endrika endrika famatrarana azy ihany koa, 7z, ary mamintina tsara ireo rakitrao miaraka aminny fanitarana rakitra.
Misaotra ilay programa izay mampiditra azy ao anaty menio tsindry havanana Windows, azonao atao ny mamaky ny rakitra voafintinao aminny tsindry vitsivitsy monja, ary koa mametaka mora foana ireo rakitrao sy lahatahiry aminny tsindry vitsivitsy fotsiny.
Manolotra vahaolana tena mahomby aminny famoretana sy ny famoahana ny rakitra, 7-Zip dia miaraka amina rindrambaiko fanamarinana rakitra fanampiny. Aminizany fomba izany dia ho hitanao mora foana raha toa ka izy ireo ireo fisie nisoratanao taminny Internet na nisy nanolana azy ireo.
Ho famaranana, raha mila programa famindrana rakitra sy decompression maimaimpoana maimaimpoana sy mora ampiasaina ianao azonao ampiasaina aminny solosainao, ny 7-Zip dia iray aminireo programa tokony hiezahanao ho solonny WinZip.
Raha tsy izany, azonao atao ny manandrana Winrar.
Fanavaozana farany: 04-07-2021